In-2 isan’andro ihany
Ireo molotra be sy kely, ny kitso, ary ireo mety hoditra miforiporitra rehetra no sasana. Fadio mihitsy ny misikotra ny any anaty any. In-2, raha be indrindra no misasa ao anatin’ny iray andro. Azo ampiana 1 ihany anefa, raha toa ka tonga fotoana.
“Gels toilette intime”, ilaina raha…
Amin’ny ankapobeny, raha tsy misy olana eo anivon’ny fivaviana dia tsy tena ilaina loatra ireny « gel » ireny. Tanana sy rano madio fotsiny ihany dia ampy. Savony tsotra, “type Marseille”, tsy misy fofona, toy ireny “savony Nosy” ireny no ampiasaina handroana, saingy tsy sasana aminy ny fivaviana. Na izany aza, azo ampiasaina foana ny “gel intime”, indrindra ho an’ireo izay manana olana amin’ny fivaviana (“mycose”, hidihidy sns) satria :
· Fampitoniana ny hidihidy sy ny vaivay vokatry ny “mycose”, ohatra, na koa raha mahatsiaro ho tena maloto na mahery fofona.
· Manamandina ny hodi-mando amin’ny fivaviana.
Ho an’ireo vehivavy tena manana olana eo anivon’ny fivaviana anefa dia aleo manatona dokotera “gynécologue”, izay hany afaka manome fanafody tena manasitrana. Marihina manko fa fampitoniana ihany ireny “gel intime” ireny fa tsy manasitrana akory.
· « Soin lavande doux Saforelle»: Manodidina ny 15.000Ar eny amin’ny farmasia.
· « Lactacyd » : Manodidina ny 15.000Ar , eny amin’ny farmasia
· Savony Nosy : 500Ar eny amin’ny mpivarotra mahazatra.